AbroStudy - အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကျောင်းသားများအတွက်ပြည်ပမှာလေ့လာမှု
နယူးအတိုင်ပင်ခံ Add (နိုင်ငံအားလုံး)
မှလှိုက်လှဲစွာကြိုဆိုပါသည် AbroStudy.com - ပြည်ပမှာအဆင့်မြင့်ပညာရေးရတဲ့အတှကျအကောငျးဆုံးန်ဆောင်မှုများ
လေ့လာဖို့မဆိုသင်တန်းသင်လိုချင် Choose. အားလုံးကြည့်ရှုပါ မှန်ကန်ကြောင်းအတည်ပြုတက္ကသိုလ်များ သင်လိုချင်တာမဆိုနိုင်ငံတွင်းရှိ, အကြောင်းပိုမိုလေ့လာသင်ယူ ဝင်ခွင့်ပေးခြင်း, ပညာရေး, လူနေမှုနှင့်အခြား. သာ မှန်ကန်ကြောင်းအတည်ပြု နှင့် အသိမှတ်ပြု ကျွန်တော်တို့ရဲ့ directory ထဲတွင်ပညာရေးအေးဂျင့်.
AbroStudy ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဧည့်သည်များအားလုံးအတှကျအသုံးဝငျသတင်းအချက်အလက်အများကြီးပေးရနေ့တိုင်းခက်ခဲအလုပ်လုပ်တယ်. ကျနော်တို့တစ်ဦးကြီးတွေအရေအတွက်ကိုအောင် ပညာရေးဝိုင်း, နှီးနှောဖလှယ်ပွဲနှင့်အလုပျရုံဆှေးနှေးပှဲ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံအားလုံးအတွက်. သာ. မြတ်သောန်ဆောင်မှုများမကြာမီဖွစျလိမျ့မညျ
စက်တင်ဘာလ 27,2017 AbroStudy တည်ထောင်သူကနေသမ်မာကမျြး ဆက်ဖတ်ရန်
သငျသညျအတိအကျတက္ကသိုလ်အတွက်လေ့လာချင်ပါနဲ့, အထူးသင်တန်းလေ့လာဖို့အဘယ်အရာကိုရိုးရှင်းစွာအတိအကျနိုင်ငံသို့မဟုတ်? ဒါဟာယခု metter ပါဘူး. ရိုးရှင်းစွာအပလီကေးရှင်းစေနှငျ့သငျအချက်အလက်များ၏ကြီးမားသောအရေအတွက်အားရနှင့်အကောင်းဆုံးကိုရွေးချယ်ပါလိမ့်မယ်.
ကျနော်တို့စိတ်ဝင်စားပြည်ပမှာပညာရေးရရှိရန်သောသင်ကျောင်းသားကြီးတွေအရေအတွက်ရယူထောက်ပံ့ငွေ. သင်ကိုထောက်ပံ့ပေးကြောင်းနိုင်ငံများနှင့်သင်တန်းများအတွက်ပညာရေး၌စိတ်ဝင်စားကျောင်းသားများကိုထံမှ applications များရရှိမည်.
AbroStudy သင့်ရဲ့တက္ကသိုလ်မြှင့်တင်ရန်နှင့်နိုင်ငံတကာကျောင်းသားကြီးတွေနံပါတ်ရလာမယ့် powerfull ဝန်ဆောင်မှုဖြစ်ပါသည်. ကျနော်တို့နေ့စဉ်နေ့တိုင်းအသစ်သောအံ့သြဖွယ်စွမ်းရည်ရှာဖွေတွေ့ရှိ. ဝန်ခံချက်စင်တာ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်.
အဆိုပါ hotest တက္ကသိုလ်များ
Founded in Shanghai in October 1951, East China Normal University (ECNU) is one of the most prestigious universities in China and is sponsored by the national programs “Project 211” and “Project 985”. With two campuses located in Minhang and Putuo District, and withatotal area of over 207 ဟက်တာ, ECNU has long been reputed as…
The University of the Highlands and Islands is the United Kingdom’s leading integrated university encompassing both further and higher education. We are notatraditional university. We are different. We are part ofanew breed of tertiary institutions, the only one in Scotland and one of onlyafew in Europe. Based in the…
We acceptanumber of International qualifications equivalent to the standard UK undergraduate requirements. For most countries this is equivalent to 12 / 13 years of education ataHigh School / Secondary School. Some courses require you to have subject specific subjects or submitaportfolio / attend an interview / စမ်းသပ် – ကျေးဇူးပြု…
TOP 10 ယူကရိန်းတက္ကသိုလ်များ 2018
ရက်စွဲပါ: စက်တင်ဘာလ 27, 2017
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကျောင်းသားများအတွက်ယူကရိန်းတက္ကသိုလ်များအဆင့်သတ်မှတ်ချက် 2018. ကျနော်တို့ပြည်ပမှာပညာရေးအတွက်တက္ကသိုလ်ရွေးချယ်ရာတွင်၏ပြဿနာနှင့်ပတ်သက်ပြီးသိကျွမ်း. ဒီနေ့ TOP ကိုတင်ပြ 10 လေ့လာဖို့ယူကရိန်းတက္ကသိုလ်များ. ရက်အနည်းငယ်အကြာကျွန်တော်ယူကရိန်းမှာဆေးဘက်ဆိုင်ရာတက္ကသိုလ်များ၏အဆင့်သတ်မှတ်ချက်ကိုဖန်ဆင်း. ဒါကြောင့်ဒီအဆင့်သတ်မှတ်ချက်ဆေးဘက်မပါဘဲဖွစျလိမျ့မညျ. အနာဂတ်ဆရာဝန်များ, အထက် link ကိုကိုလိုက်နာကျေးဇူးပြုပြီး. အခွားသောအနာဂတ်…
ယူကရိန်း TOP ဆေးဘက်ဆိုင်ရာတက္ကသိုလ်များ 2018
ရက်စွဲပါ: စက်တင်ဘာလ 25, 2017
လေ့လာမှုဆေးဝါးများအတွက်ယူကရိန်းအတွက်အကောင်းဆုံးဆေးဘက်ဆိုင်ရာတက္ကသိုလ်ကိုရှာဖွေဖို့ကိုဘယ်လို? AbroStudy.com အဖြေကိုသိတယ်. ဤတွင်ယူကရိန်းမှာဆေးဘက်ဆိုင်ရာတက္ကသိုလ်များ၏ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဆင့်သတ်မှတ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်. ယူကရိန်းအတွက်ဆေးဝါးကိုလေ့လာ! ကျနော်တို့ကဒီအဆင့်သတ်မှတ်ချက်ကိုနိုင်ငံတကာကျောင်းသားများအတွက်ယူကရိန်းမှာဆေးပညာကိုလေ့လာဖို့အကောင်းဆုံး option ကိုရွေးချယ်ဖို့ကူညီနိုင်လိမ့်မည်ဟုသေချာ. သူတို့ကျူရှင်ရှိသည်ကြောင့်ယူကရိန်းမှာ MBBS သင်တန်းများအလွန်ဆွဲဆောင်မှုရှိပါတယ်…
West Lafayette, ယူအက်စ်အေ
တော်တယ်! လွယ်ကူသော, အစာရှောင်ခြင်းနှင့်အသုံးဝင်သော.
ငါ AbroStudy အကြောင်းကိုမသိရပါဘူး. ငါကဘယ်တော့မှအသုံးမပြု. သို့သော်လည်းငါသည်တည်ထောင်သူကိုသိရ, လွန်ခဲ့သောနှစ်အနည်းငယ်ကသူသည်ငါ၏ဝန်ခံချက်နှင့်ငါ့ကိုကူညီပေးခဲ့သည်.
အဲဒီနှစ်မှာငါတဦးတည်းပညာရေးအေးဂျင့်အားဖြင့် scamed ခံခဲ့ရခြင်းနှင့်ဗီနောက်ကျောကိုငါ့ပိုက်ဆံရဝန်ခံချက်အောင်ငါ့ကိုကူညီပေးခဲ့သည်.
တကယ်ပဲကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦး, ဒါကြောင့်ငါ AbroStudy ယုံကြည်စိတ်ချကြောင်းသေချာပါတယ်တို့နှင့်ကြီးသောစီမံကိန်းအား.
ကော်မတီ Hambeleleni Amono
ငါသည်ငါ့ဝန်ခံချက်ပြီးနောက်ပြီးသား AbroStudy.com အကြောင်းကိုလေ့လာသင်ယူကြပါပြီ. ဤအတောအတွင်းငါဗီတွေ့ဆုံခဲ့ပြီး, AbroStudy လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်အနည်းငယ်၏တည်ထောင်သူ.
သူဟာယူကရိန်း၌ငါ့ဝန်ခံချက်နှင့်ငါ့ကိုကူညီပေးခဲ့သည်. သူကအရမ်းယဉ်ကျေးများနှင့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ပညာရေးအတိုင်ပင်ခံခဲ့သည်. သူနဲ့တူဝန်ဆောင်မှုကိုဖန်ဆင်းကြောင်းလေ့လာသင်ယူခဲ့ကြသောအခါငါတကယ်ကိုဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိ၏.
ငါသိတယ်, ဒါကြောင့်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိကျောင်းသားများကိုတွေအများကြီးများအတွက်အလွန် USER ဖြစ်လိမ့်မည်ဟု. ဤသူသညျအစဉ်အမြဲလူတွေကိုဂရုစိုက်.
စီးပွားရေးနှင့်ကုန်သွယ်ရေး Poltava တက္ကသိုလ်လေ့လာမှုစီးပွားရေးတက္ကသိုလ်
AbroStudy ကျေးဇူးတင်ပါသည်, ကလွယ်ကူခြင်းနှင့်ဘေးကင်းလုံခြုံခဲ့.
ရက်စွဲပါ: နိုဝင်ဘာလ 26,2017
ချစ်ခင်ရပါသောမိတ်ဆွေများက, AbroStudy.com မှာသင်တို့ကိုတွေ့မြင်ဝမျးသာ ... ဆက်ဖတ်ရန် >>
AbroStudy ရန်ကမ္ဘာအဝှမ်းမှကျောင်းသားများအတွက်နိုင်စွမ်းပေးသည် လေ့လာချက် မည်သည့်တိုင်းပြည်မှာ. ကျနော်တို့လူတိုင်းအတွက်နေရာတိုင်းပညာရေးပေး. အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာတက္ကသိုလ်များအတွက်ဝန်ခံချက် ယခုအလွန်လွယ်ကူပြီးလုံခြုံစိတ်ချရသောဖြစ်ပါသည်. သာ ယုံကြည်စိတ်ချရသောပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ နှင့် မှန်ကန်ကြောင်းအတည်ပြုတက္ကသိုလ်များ. သင့်ရဲ့တောက်ပတဲ့အနာဂတ်ယခု Start!
2017 မူပိုင်ခွင့်များရယူပြီး © AbroStudy
SQL တောင်းဆိုမှုများ:174. မျိုးဆက်အချိန်:0.291 စက္က. memory သုံးစွဲမှု:14.78 mb